Nezvedu - Shandong Inobwinya Laser Technology Co., Ltd.
Shandong Glorious Laser Technology Co., Ltd. (Tarisa kune GRS iri pazasi), yakavambwa muna 2011, muzinda uri muWeifang, guta guru rekite reChina, uye ine hofisi yebazi muguta reJinan.Chigadzirwa chedu chikuru: fiber laser yekucheka muchina / laser yekumaka muchina / laser welding muchina / laser yekuchenesa muchina / laser engraving muchina
Fekitori nyowani yakatamira kuguta reWeifang mugore ra2019, inosvika 100,000 square metres, uye chivakwa chehofisi 3,000 square metres.Isu tine vashandi mazana maviri, kusanganisira makumi mashanu nyanzvi dzeR&D mainjiniya uye vashanu vanodzoka.
KUDUKURA kwakawana anopfuura zana R & D patents anosanganisira Reddot Mubairo uye IF Mubairo, uye anonyatso itisa chigadzirwa chekutonga maitiro.
GRS yakawana zvitupa zve ISO, FDA, CE, uye SGS uye inokwanisa kuzadzisa zvinodiwa nevatengi pasi rese.
Tichapa zvikamu zvinodyiwa pamutengo weagency.
24 maawa epamhepo sevhisi, yemahara tekinoroji rutsigiro.
Muchina wakagadziridzwa usati waendeswa, dhisiki rekushanda rinosanganisirwa mukuunza.Kana paine mimwe mibvunzo, pls ndiudzeiwo.
Isu tine rairo yemanyorero uye CD (Kutungamira Vhidhiyo) yesoftware Kuisa, kushanda uye achine kushandisa nekugadzirisa.
Tsika dzedu dzeCorporate
1. Enterprise tenet: mutengi kutanga, mukurumbira kuhwina, yakanakisa mhando uye yemhando yepamusoro sevhisi.
2. Business philosophy;a.Unhu - hwaro hwemufananidzo;Sainzi uye tekinoroji - kiyi yekusimuka;Kutonga - dingindira risingaperi;Innovation ndiyo tsime rebudiriro.b.Tonga bhizinesi nevashandi, vandudza mhando nesainzi uye tekinoroji, kuhwina musika nemhando, uye kusimudzira budiriro nehunyanzvi.
3. Kuziva kwechikwata: Ini ndinovimba nebhizinesi kuti rirarame uye bhizinesi rinotsamira pandiri kukura;Ini ndinoedza nepandinogona napo bhizinesi, uye bhizinesi rinonditsvakira purofiti.
4. Enterprise style: a.inoshanda, inoshanda, yakabudirira uye inoshanda nesimba.b.Realistic, pragmatic, inoshingaira uye inoshanda.
5. Bhizinesi mweya: a.kuda fekitari, kuzvipira, kupayona uye kuita basa.b.Kuzvipira, mutoro, kushanda nesimba uye kuvandudza.c.
6. Hunhu hwehunyanzvi: a.vashandisi ndivo vabereki vezvekudya nezvipfeko, uye sevhisi ndiro basa guru.b.Mutengi kutanga, sevhisi kutanga.
7. Mufananidzo weCorporate: shanda zvinoenderana nemutemo, maneja zvesainzi, shanda nenzira yakasimukira, iva nemaitiro akanakisa, sevhisi yemhando yepamusoro, mhando yepamusoro, tekinoroji yakanakisa uye uve nehushingi hwekuvandudza.
8.Hunhu mutemo: tekinoroji yepamusoro, kutungamira kwesainzi, emhando yepamusoro engineering uye zvigadzirwa, kutendeseka uye kuzvipira, uye sevhisi munzvimbo.
9. Kutenda kwebhizinesi: a.tora nzira yebhizimusi nhasi uye uite zvakanaka mubudiriro yemangwana.b.Tora mugwagwa webhizimusi, tsvaga zvirongwa zvebudiriro uye nyora chitsauko chakajeka.
10.Maitiro ebhizinesi: a.tarenda zano, brand zano, innovation zano uye musika kuvandudza zano.b.Shandisa zano retarenda, mhando, hunyanzvi uye kusimudzira musika, batanidza nekuvandudza mwero wekuvaka nekumisikidza, uye gadzira nekuwedzera kugadzirisa nekugadzira kugona.
11. Enterprise values: kusambogutsikana, kuyedza kirasi yekutanga, kuzvivandudza uye kuenderera mberi kwekusimudzira.
12. Bhizinesi nharaunda: inopindirana hukama hwemukati uye yakabatana kuedza kwechirimwa chose;Smooth hukama hwekunze uye ndibatsire kukudziridza mumativi ese.
13.Huzivi hweCorporate: hutongi hwakanangana nevanhu, mhando yekutanga sevhisi, maitiro ekushanda nesimba uye kugona kwakanyanya.
14. Chiito sirogani: rarama nekushanda nesimba uye kuvandudza nekuvandudza.
Zvishongo Welder, Sheet Metal Laser Cutter, Automatic Laser Welder, Laser Cnc Machine, Laser Cnc Machine Kutengeswa, Carbon Fiber Laser Cutter,